China Yakavanzika Label Nhema Eyelash Packaging Bhokisi Wholesale 25mm 100% Mink Eyelashes fekitori uye vagadziri | Weiti
Yakavanzika Label Nhema Eyelash Packaging Bhokisi Wholesale 25mm 100% Mink Eyelashes
1, 25mm yakareba fluffy mink fur lashes
2, Yakakwana curl kuti ienderane neyako maronda
3, Nyore uye yakasununguka kunyorera
4, Yakazvimirira yega logo
Kuchena kweKalocils maronda:
Ruvara rwakajeka, rwakatsetseka, kwete kuora, inova hunhu hwemhando yepamusoro eyelashes.
Unyoro uye kuoma:
Iyo yakaoma zvinhu ichaisa yakawanda yekumanikidza pane eyelids, uye mushure mekuipfeka, inotaridzika kunge yekunyepedzera uye isiri yechisikigo. Kana eyelashes enhema akanyorovera, iwo haana kumira zvakakwana, uye iyo yakakombama ichave yakaderera. Inonyanya kukodzera ndeyekuti yakapfava uye yakaoma zvishoma pane ako eyelashes chaiwo.
Yakanaka manyepo eyelashes anozoerekana asimuka, akafanana neyakawedzera kukura yeiyo eyelashes yepamusoro. Akatwasanuka eyelashes enhema anonzwa kuomarara kana asakara, uye panenge pasisina runako.
Kushanda uye mashandisiro:
Eyelashes enhema akakosha kuti uwane runako. Kunyangwe iri yekugadzira zuva nezuva kana kutora chikamu mumapati akasiyana siyana, akanaka eyelashes anokwezva kutarisisa kwevanhu uye kuzviita kuti uwedzere kuva nechivimbo.
Mhando dzakasiyana dzemhando dze eyelash dzinogona kupihwa muhuwandu hwakawanda kubva muchitoro uye zvakare inotsigira maitiro, kuti iwe ugone kuve neyako yaunofarira eyelashes chero nguva. Seyenhema eyelash inogadzira, yakagara iri chinangwa chedu kuenderera nekukudziridza inopisa uye inozivikanwa masitaira eyelash.
Mhando dzakasiyana dzemanyepo ekuputira mabhokisi emabhokisi anogona kuvezwa, uye yako yega logo inogona kugadzirwa. Zvese zvaunoda kuti utitumire isu kana kutiudza pfungwa yako yeiyo logo iwe yaunoda. Yedu nyanzvi dhizaini timu inokupa iwe yakanakisa zano. Isu tinopa yemahara logo dhizaini uye kurongedza dhizaini masevhisi. Kana iwe uchida zvigadzirwa zvemifananidzo, pikicha yakatorwa inogona kuitwa nesu.
Chengetedza yako marara mubhokisi rekuchengetera ravakasvika mukati kuti rirambe rakachena, rakaoma uye rakadzivirirwa kubva mukukuvara.
Kana maronda ako akawedzera pamusoro pawo, USAWANZE iwo WET, izvi zvichavaparadza. Kuti uchenese chero anovaka, nyoro nyorowa marashi ako nemascara yakachena. Iwe unogona zvakare kunyatso bvisa zvakasara glue pane iro bhendi rekukwikwidza netweezers. Ndokumbirawo USATombo tora maronda ako anyorove.
Kana uchichengetwa zvakanaka maronda ako anoshandiswazve zvakapetwa ka20-30 nguva
ZANO: Kuti uwedzere hupenyu hurefu uye chengetedza iwo maitiro epakutanga emawoko ako zvakanyanya, usashandise mascara yakanangana navo. Panzvimbo iyoyo, isa mascara kune ako epanyama maronda kutanga, tendera kuti iome, wozoisa yako maronda.
Pashure: Gadzirisa Yakavanzika Label Yemunhu Classical Faux Mink Eyelash Extensions
Zvadaro: Yakasarudzika Yakasarudzika Label Mabhokisi Wholesale Fluffy 25mm Mink Eyelashes
3d Eyelashes Dzenhema
Fluffy Nhema Eyelashes
dzakavanzika chitaridzi maronda
Bulk Yakachipa Mutengo Yakavanzika Label Strip Lashes 25m ...
Wholesale Custom Logo Eyelash Packaging Bhokisi 25m ...
China Eyelash Factory OEM ODM Wholesale Hutsinye ...
Tsika Eyelash Kupakata Kwakapfava gobvu Yakagadzirwa nemaoko 25 ...
liner yemaziso, eyeliner, Ziso Lashes, mink lashes, Eyelash Kuwedzeredzwa, Vatengesi Eyelash,